မိန်းကလေးအများစုက ဘာကြောင့် ကိုကိုတွေကို ကြိုက်ကြတာလဲဆိုရင် – Blue Sea
မိန်းကလေးအများစုက ဘာကြောင့် ကိုကိုတွေကို ကြိုက်ကြတာလဲဆိုရင်
ဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်မေးတယ်။ နင်တို့မိန်းကလေးတွေ ဘာလို့ ကိုယ့်ထက်အသက်ပိုကြီးတဲ့ယောက်ျား လေးကို ကြိုက်တာလဲတဲ့။ မိန်းကလေး အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပေမယ့် မိန်းကလေးတော်တော်များများက မိမိထက်ပိုပြီး
အသက်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားလေးကိုကြိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုကြိုက်ဖြစ်တာ အကြောင်းအရင်းရှိပါ
တယ်။ မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ထက်အသက်ပိုကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကို ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းများကို Shwemom စာဖတ်ပရိတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ပိုပြီး အတည်တကျရှိတယ်။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကောင်လေးတွေနဲ့တွဲရင် ရင်ခုန်ဖို့တော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ခုန်တာက ဘဝမမဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကတော့ တည်ငြိမ်ပြီး ရင့်ကျက်နေလေ့ရှိပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ
အသက် ၂၅ကျော်ရင်တောင် အပျိုကြီးလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က ထင်တတ်ကြတယ်လေ။ ယောက်ျားလေးတွေကျတော့
အသက် ၃၅လောက်မှာ လူပျိုကြီးလို့အခေါ်ခံရတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ Relationship မှာ တစ်ခါတစ်လေ ၅နှစ်လောက်ကွာနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Brainy is new sexy ဆိုတဲ့ စကားလေးကြားဖူးပါတယ်။ တကယ်တော့ Brainy was always sexyပါ။ အသိဥာဏ်ရင့်ကျက်မှုက ယောက်ျားလေးတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကို အရွယ်ရနေပြီဖြစ်တဲ့
အမျိုးသားတွေက ဆယ်ကျော်သက်မြှီးကောင်ပေါက်တွေထက်စာရင် ပိုမိုကိုင်တွယ်တတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဆို
တာ ဘယ်လောက်ပဲ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအော်နေနေ အချိန်တန်ရင် အားကိုးချင်တဲ့စိတ်က ပေါ်တတ်လာတာပါပဲ။
အဲ့ဒိအချိန်မှာ သူလည်းမသိ ကိုယ်လည်းမသိဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုး မရောက်ချင်ပါဘူး။
(၃) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေပြီ။
မိန်းကလေးတွေက နှလုံးသားနဲ့ ဘဝကိုရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။ ရွေးလို့ရတဲ့သူက အနည်းစုပဲရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်
တော့ အမျိုးသားကို အားကိုးကျရမှာပါ။ သူလည်း အလုပ်မရှိ ကိုယ်လည်း အလုပ်မရှိဆို မွေးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေ
အတွက် ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနုိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ခိုင်ခိုင်မာမာရှိတဲ့သူကိုရွေးရတာပါ။
ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ကောင်လေးတွေကို တွဲမိရင် ခုံဆွဲပေးတာတို့၊ ကားတံခါးဖွင့်ပေးတာတို့ မရှိတတ်ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေ
ကလည်း ဒါကိုလိုအပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပေးရင်တော့ မမုန်းတတ်ပါဘူး။ အသက်ကြီးတဲ့
အမျိုးသား အများစုကတော့ အဲ့ဒိလိုအမူအရာလေးတွေရှိတတ်ပါတယ်။
(၅) သူက သင့်ကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားမှာမဟုတ်ဘူး။
အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူတွေကို ပိုမိုဂရုစိုက်တတ်ကြပြီး ပြောင်းလဲဖို့လည်းကြိုးစားလေ့မရှိပါဘူး။ အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးတွေကတော့ ပြောင်းလဲယူဖို့ကြိုးစားတတ်ပါတယ်။ အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ယေဘူယျပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သူကသင်နဲ့အတူ စိတ်ဆိုးတိုင်းပြိုင်ကစားမယ့်သူမဟုတ်ဘူး။ များသောအားဖြင့် သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ပြန်ချော့ကာ အနစ်နာခံချစ်မယ့် သူမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဆူဆူညံညံနေရာတွေလည်း သင့်ကိုခေါ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုပြီးတော့လည်း
သူတို့က ကိုယ့်မတိုင်ခင် ရည်းစားတွေလည်း ထားခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ။ Relationshipနဲ့ပက်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံအပြည့်အဝ
ရှိနေတာမို့ သူတို့နဲ့ စကားပြောရတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
မိမိထက်အသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သွားသွား မိမိက ငယ်ကြောင်းခဏခဏအပြောခံရပြီး နုပျို
တယ်လို့ အထင်ခံရတာပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ။် နောက်ထပ်ပြောဖို့ကောင်းတာက အသက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားလေးတွေက
အဲ့ဒိလိုအပြောခံရင် မနာလိုလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့ကပိုတောင်ပျော်သေးတယ်။ သူတို့ အသက်ငယ်တဲ့ကောင်မလေးကို
ဘယ်လိုရအောင် ယူထားလဲဆိုတာကို ကြွားချင်နေကြတာလေ။
မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီက ငွေမချူချင်တာမှန်ပေမယ့် ပိုက်ဆံရှင်းပေးတာကိုတော့ စိတ်မဆိုးကြ
ပါဘူး။ မိန်းကလေးအများစုပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာမနည်း အလှကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကုန်ကျနေချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံလက်မှတ်ဖိုးပါ
မစိုက်နုိုင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေက အသက်ငယ်ပြီးဝင်ငွေမရှိသေးတဲ့ရည်းစားထက်ပိုပြီး သင့်
SHARE FROM မဒီလေး(Shwemom)
He is older than most of the girls like this cause.
ဟိုတဈနကေ့ friend asked. Why girls are suspicious, just like older men bow. Many girls, although they are not more girls
Like the older boys by nature. In fact, I see reasons
. Girls just like the older boys causes Shwemom deciding http://www.visionrevision.org reading below.
(1) are more stable.
Together with young boys will love. But Aurora is notalife. The older boys usually calm and mature. The girls
Even if more than 25 years old, is thought to be around. In boys
Around age 35, beingabachelor. So boys and girls and Relationship sometimes5years.
(2) an intelligent mature
Brainy is new sexy words I heard. In fact, Brainy was always sexy. Appropriate boys mature attractive. Size of the difficult situation facing the world such as
The men are often handled more than the body of teenage မွှီး vents. girls
No matter how women’s rights in order to want to rely on staying at the time.
And usually when he does not know i do not know situation.
(3) hasastrong career.
Girls can not choose the life of the heart. Onlyafew people who can be selected. Usually
I’ll rely on the National. I children bornajob,ajob,
Give him some respite in the regime. So chooseastrong vocational times.
Draw when they have attached to the young boys do, It does not pay to open the door. girls
This is not necessary. But that’s approaching us and if we do not hate. The elder
Most usually these kids here.
(5) He is not trying to change your.
The older boys were lovers, does not try to change, they are more careful. Often try to take young boys are. They are not. Generally speaking.
He is angry with you, he will not play. You usually will not forgive, norasacrificial love most. Noisy areas should also not be taken. She
Talking to the (7) better.
Just before they’ve ever had many lovers. Relationship is becomingafull experience
There, so I feel more comfortable talking to them.
(8) brings young.
Together with older people and, as such, rather than wherever it was often young
I think that hit the fun. ပါတယ say further that even the older boys
He says nothing has been jealous kind. They ပိုတောငျ happy couple. The young girl
How do you say you want to keep going to boast.
(9) do not cost anything.
Girls want the money from the man Picchu is giving up, but the money is not angry
. Most of the girls. Cosmetics and of yourself, while cinema ticket cost
Savor the regime. Here, old men, young and no income should be more than lovers
SHARE FROM (Shwemom)